Zimbabwe Has a Reputational Problem - U.S. - allAfrica.com
Zimbabwe Has a Reputational Problem - U.S.
The US government has been shocked by the manner in which President Emmerson Mnangagwa's government has dealt with dissent and Harare's reputation has not been pleasing, a senior American official said Wednesday.
"However, again, let's be very frank, Zimbabwe has a reputational problem. We have great concerns over how the government treats its own citizens. We have great concerns over the space that is available for democracy and governance in Zimbabwe," said Nagy.
"We have been alarmed with how the government has treated it's own citizens. So those are the issues. But as I said have had very frank and honest discussions between ourselves and the highest levels of your government."
"So hopefully, again, my dream and prayer is that we can have fully normalised positive relations with every country in Africa and Zimbabwe is near the top of my wish list, again, given the personal connections," added Nagy.
"However, there is a very false narrative out there which I want to correct. Some people say that the United States has sanctions against the country of Zimbabwe. We do not; repeat, do not have sanctions against the country of Zimbabwe. We have sanctions against certain individuals and certain corporations. There can be greater detail on that. But not against the country of Zimbabwe," said Nagy.
"There is nothing to stop US businesses from investing in Zimbabwe, from going to Zimbabwe," said the diplomat.